Min Tone Min, the pioneer of CONDOM?
Clubnypian :: Relax Zone ( အေးဆေး.. နွေးထွေး.. ) :: Art of Nypians Share |
Subject: Min Tone Min, the pioneer of CONDOM? Wed Jul 09, 2008 3:45 am
ကွန်ဒွမ် အစ မင်းတုန်းမင်းမှ
အဟမ်း... အဟမ်း.. ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ .. သုတေသီတွေအနေနဲ့ အတော်လေးအငြင်းပွားစရာတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ တယ်လို့ကြားသိရပါတယ်။ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ လက်ရှိကမ္ဘာမှာ သားဆက်ခြားရေးအပြင် ကူးဆက်ရောဂါများမပြန့်ပွား စေရန် မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်ဒေသတို့ပါမကျန် နေရာအနှံ့ ကွန်ဒွမ် Condom ကို ကျယ်ပြန့်ထိရောက်စွာသုံးစွဲကြပါရန် အစိုးရနှင့် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ပညာပေးဆောင်ရွက်ခဲ့လို့ ယခုဆိုလျှင် အလွန်ပင်အကျိုးသက်ရောက်မှူ့ ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ခုကိစ္စကတော့ သမိုင်းသုတေသီတို့နှင့်ပက်သက်ပါတယ်.. မြန်မာ့သမိုင်းသုတေသီတို့အနေနှင့် အထက်ဖေါ်ပြပါ ကွန်ဒွမ်ကို ဟိုး..ယခင် မြန်မာမင်းများလက်ထက်ကတည်း မှစတင်၍ ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခဲ့သလော.. ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားဖွယ်၊ အနောက်နိုင်ငံသုတေသီများနှင့် အငြင်းပွားဖွယ်.. သို့လော.. သို့လော ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဖြစ်ပုံက သွားတိုက်ဆေးလိုပါ.. အဲ...ဒီလိုပါ...
Last edited by PawThwut on Wed Jul 09, 2008 4:15 am; edited7times in total
Subject: Re: Min Tone Min, the pioneer of CONDOM? Wed Jul 09, 2008 3:46 am
မြနန်းစံကျော် မန္တလေးရွှေနန်းတော်ကြီးကို ရှေးမူမပျက် ပြန်လည်ပြုပြင်မွန်းမံစဉ်က
နန်းတော်တွင်းမြေတိုက်တော်တနေရာမှ အထက်ဖော်ပြပါ ကွန်ဒွမ်ဟု ယူဆဖွယ်ရှိသော
ပစ္စည်းတခုကို တူးဖော်ရရှိခဲ့သည် ဟုဆိုပါတယ်။ သက်ဆိုင်သူများမှလည်း ထိုအရာသည်
အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဟုယူဆ ရသည်နှင့်အညီ မြန်မာ့ သမိုင်းသုတေသီများ
သို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ကာ လိုအပ်သည်များကို လေ့လာမှူ့ပြုစေပါသည်။ သမိုင်းသုတေသီများ
အနေနှင့် အဆိုပါပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်သမိုင်း အထောက်အထားမျှ ရှာဖွေမတွေ့ရှိပဲ
နောက်ဆုံး..ခေတ်အတတ်များကို ကျွမ်းကျင်သော သေနတ်ဝန်တိုင်းတားမင်းသော်၎င်း၊
အနောက်နိုင်ငံများသို့ စုံလင်စွာ သွားရောက်ဖူးသော ဗဟုသုတပြည့်စုံသော သံတမန်တော်
ကင်းဝန်မင်းကြီးသော်၎င်း၊ သို့မဟုတ် ကုတ္ထိယကျမ်းနှံ့စပ်သေ ဦးပုညသော်၎င်း၊ နန်းတွင်း
ဘုရင့်လက်စွဲသမားတော် မောင်ခဲ သော်၎င်း..ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့မှ မြန်မာဘုရင်နှင့် သူ၏
များပြားလှသော မိဖုရားတော်၊ အပျိုတော်၊ အအိုတော်၊ ကိုယ်လုပ်တော်၊ မောင်းမတော်..
ဘာတော် ညာတော် တို့၏ အရေးကိစ္စများ ဖြေရှင်းရန် အတွက် တီထွင်ပေးထားခြင်း
ဖြစ်တန်ရာ၏ ဟုကောက်ချက်ချရန် အရေးသာရှိလေတော့သည်။ သို့သော်လည်း အဆိုပါ
ကိစ္စနှင့်ပက်သက်၍ ပြည်သူလူထုသို့ ဖော်ထုတ်ပြန်ကြားရန်အရေး ခက်ခဲနေသော
အချက်တချက်မှာ တူးဖော်ရရှိသော ပစ္စည်းသည် မျှော်မှန်းနိုင်သည်ထက် သာလွန်၍ကြီး
နေသောကြောင့် သမိုင်းသုတေသီတို့အနေနှင့် မ၀ံ့မရဲဖြစ်နေကြရှာသည်။ သို့သော်လည်း
ထိုကောက်ချက်မှန်ကန်ပါက ဟိုးယခင် လက်ထက်မှစ၍ မြန်မာမင်းတို့နေနှင့် ဖော်ပြပါ
ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ ၏ တီထွင်အစွမ်းဖြင့် ကိုယ်ခန္ထာဖွံ့ထွား ကြီးမားမူ့မှာ ယခုလက်ရှိ ခေတ်မှီ
လှပါသည် ဆိုသော နိုင်ငံကြီးမျာမှ ဆေးသုတေသန ပညာရှင်များပင်လျှင် အလွန်အမင်း အံ့သြ ချီးနမ်း ကျွတ်ကျဲသွား ဖြစ်ကြဖွယ်ရာရှိပေသည်။
ဤသို့ရှုပ်ထွေးလှသောအခြေနေအရပ်ရပ်ကို နောက်ဆုံး လက်ရှိ ကြွင်းကျန်သော မြန်မာ
မင်းမျိုးမင်းနွယ်တစ်ဦး မှခိုင်မာစွာဖြေရှင်းလိုက်နိုင်ပါသည်။ တူးဖော်ရရှိသော အဆိုပါ
"မင်းတုန်းမင်းတရားကြီး အဆောင်တော်မကူးသောညများ၌ ခွအိပ်တော်မူလေ့ရှိသည့်
ဖက်လုံးတော် ၏ အစွပ် သာဖြစ်ကြောင်း.."
မြန်မာ့သမိုင်းနှင့်ပက်သက်သော အချက်အလက်များကို မခိုင်မာသော သတင်းရပ်ကွက်မှ
ရရှိ၍၊ ဖြစ်သလိုစိတ်ကူးတည့်ရာရေးထားကြောင်းနှင့် အတည်မှတ်ယူပါက
မိမိ၏မိုက်မဲမှု့ မျှသာဖြစ်ကြောင်း.. ထပ်လောင်းပြောကြားလိုက်လေသတည်း....။ ။
မှ ဖဲ့ယူ၍ ဤပို့စ်ဖတ်ခြင်းအားဖြင့် တနေ့တာပင်ပန်းမှု့ နှင့်တာဝန်များ
ဖိစည်းမှု့တို့ ကို သင်၏ အပြုံးတပွင့်ဖြင့် လဲလှယ်နိုင်ပါစေ....
Tag Link: Original Post by Athin Khaya >>>GO!
Subject: Re: Min Tone Min, the pioneer of CONDOM? Tue Jul 15, 2008 9:24 am
Haha your post save 2hours for me ,and but it's just 2mins for audience
Subject: Re: Min Tone Min, the pioneer of CONDOM?
Clubnypian :: Relax Zone ( အေးဆေး.. နွေးထွေး.. ) :: Art of Nypians